UEFA oo ku dhawaaqday magacyada AFAR ciyaaryahan ee u sharaxan xidiga ugu fiicnaa todobaadkan Champions League – Gool FM
UEFA oo ku dhawaaqday magacyada AFAR ciyaaryahan ee u sharaxan xidiga ugu fiicnaa todobaadkan Champions League
( Champions League) 04 Okt 2018. Xiriirka kubadda cagta ee qaarada Yurub (UEFA) ayaa waxay ku shaaciyeen website-kooda rasmiga ah liiska musharaxiinta xidiga ugu fiicnaa tartanka UEFA Champions League todobaadkan waxaana lagu dhawaaqi doonaa 24 saacadood ee soo aadan.
Waxaa liiska musharaxiintan kusoo wada baxay magacyada 4 ciyaartoy uu hogaaminayo xidiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi, kaasoo 2 gool kasoo dhaliyay kulankii adkaa xalay ee Tottenham Hotspur.
Sidoo kale waxaa liiskan ku soo baxay laacibka reer Brazil iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr, kadib markii uu isna goolasha saddexleyda kasoo dhaliyay kooxda FK Crvena Zvezda, xili uu kulanka kusoo idlaaday 6-1.
Paulo Dybala ayaa sidoo kale qeyb ka ah liiska musharaxiintan oo isna kulankii Young Boys kasoo dhaliyay saddexley, halka musharaxa afaraad uu noqday weeraryahanka kooxda Roma ee Edin Dzeko oo isna goolasha saddexleyda kasoo dhaliyay kooxd Viktoria Plzen.
Guuleystaha ayaa lagu dhawaaqi doonaa Jimcaha bari ah, ka dib marka ay xiranto codeynta taageerayaasha, waxaa xusid mudan in Messi uu ku guuleystay abaalmarintan, kulamadii wareegga koowaad kadib saddexleydii uu ka dhaliyay kooxda PSV Eindhoven.
Madaxweynaha Real Madrid oo kula dabaal dagey Barcelona guushii ay ka gaareen Tottenham _(Maxay tahay sababta?)
“Cristiano Ronaldo wuxuu u qalmaa inuu ku guuleysto abaal marinta Ballon d'Or ”_Federico Bernardeschi